कति रिपोर्टरहरूले ठूलो अनुवर्ती समाचार कथाहरू लेख्न सक्छन्
एक ताजा लडाई कुञ्जी खोज्दै
एक आधारभूत ब्रेक न्यूज लेख लेख्नु एक सुन्दर सीधा कार्य हो। तपाईं आफ्नो नेतृत्व , जो कहानी मा सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण तथ्यहरूमा आधारित छ लेखेर सुरु गरेर।
तर धेरै समाचार कथाहरू केवल एक-पटक घटनाहरू होइनन् तर विद्यमान विषयहरू जुन हप्ता वा पनि महिनाको लागि अन्त्य गर्न सक्दछ। एक उदाहरण एक अपराध कहानी हुनेछ कि समय संग खुलासा - अपराध प्रतिबद्ध छ, त्यसपछि पुलिस खोज र अन्तमा एक संदिग्ध पक्राउ।
अर्को उदाहरण एक लामो परीक्षण एक विशेष गरी जटिल वा रोचक अवस्थामा समावेश हुन सक्छ।
रिपोर्टरहरूले प्राय: लामो समयसम्मका विषयहरूको लागि यी पछ्याउने लेखहरूलाई के भनिन्छ भनी यी कुराहरू। यस लिङ्कमा तपाइँ पछ्याइएको कथाहरूको लागि विचारहरू विकास गर्ने बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी कसरी पछ्याउने पछाडि लेख्न छलफल गर्नेछौं।
एक प्रभावकारी अनुवर्ती कथा लेख्ने कुञ्जी नेतृत्वको साथ सुरु हुन्छ । तपाईंले एक दिनको लागि जारी राखिएको कथाको लागि प्रत्येक दिन एउटै लिखित लेख्न सक्नुहुन्न।
बरु, तपाईंले प्रत्येक दिन ताजा नेतृत्व निर्माण गर्नु पर्दछ, जसले कथाको अन्तिम घटनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
तर एक नेतृत्वमा लेख्दा कि ती पछिल्लो घटनाक्रमहरू समावेश छन्, तपाइँलाई पनि तपाइँका पाठकहरूको साथमा सुरू गर्न कुन मूल कथा कुन कुरालाई सम्झाउनुपर्दछ। त्यसैले अनुवर्ती कथाले वास्तवमा नयाँ घटनालाई मूल कथाको बारेमा केहि पृष्ठभूमि सामग्रीसँग जोड्दछ।
चलो भन्छु कि तपाइँ एक घर आगोको आवरण गर्नुहुन्छ जसमा धेरै मान्छे मारिएका छन्।
यहाँ छ कि तपाइँ कसरी पहिलो कथा पढ्न सक्नुहुन्छ:
दुई जना मानिस मारिएका थिए जब एक छिटो घुमाउने आगो आफ्नो घरबाट जोगियो।
अब भनौं धेरै दिन बितिसकेको छ र आगो मार्शलले तपाईंलाई बताउँछ आगोको आगोको मामला थियो। यहाँ तपाइँको पहिलो पछाडिको नेतृत्व गरिएको छ:
यस हप्ताको सुरुवात दुई जना मानिसलाई मारिएको घर आगो जानबूझेर सेट गरिएको थियो, आगो मार्शलले कल घोषणा गरेको थियो।
नयाँ विकासको साथमा आगो मार्शलले घोषणा गरेको छ कि यो आगो थियो।
अब यो कदम एक कदम अगाडी लागौं। चलो एक हप्ता बितिसकेको छ र प्रहरीले एक जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ जुन उनीहरूले आगो लगाउँछन्। यहाँ तपाईंको नेतृत्व कसरी हुन सक्छ यहाँ छ:
प्रहरीले एक जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ जुन उनीहरूले गत हप्ता आगो लगाएका थिए जसले एक घरमा दुई जनालाई मारे।
विचार पाउनुहोस्? फेरि, नेतृत्वले नवीनतम विकासको साथ मूल कथाबाट सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारी जोड्दछ।
रिपोर्टरहरू यस प्रकारका अनुसरण गरिएका कथाहरू गर्छन जसले पाठकहरू जो मूल कथा पढ्न सक्दैनन् थाहा पाईन र के गरिरहेको छैन।
बाँकी अनुवर्ती कथाले पृष्ठभूमि जानकारीको साथमा नयाँ समाचारहरू संयोजन गर्ने समान सन्तुलन कार्यलाई पछ्याउनु पर्छ। सामान्यतः, नयाँ घटनाक्रम कथामा उच्च हुनुपर्छ, जबकि पुरानो जानकारी कम हुनु पर्छ।
यहाँ आगो संदिग्ध को गिरफ्तारी को बारे मा तपाईंको अनुवर्ती कहानी को पहिलो केहि पैराग्राफ कसरि जान सक्छ:
प्रहरीले 23 बर्षको लार्सन जेनकिन्सले पेट्रोलसँग रक्सीलाई घरमा आगो लगाएर राखेका थिए। उनी आफ्नो प्रेमिका, लरेना हेलबर्ट, 22 र उनको आमा, मरियम हलबर्ट 57 बर्षको मृत्यु भएको थियो।
जासूस जेरी ग्रोङ्गले भने जेनकिन्सनहरू स्पष्टतः गुस्साएका थिए किनभने हेलबर्टले हाल उनीसँग भोगेका थिए।
आगामी तीन मङ्गलबार बिहान आगो सुरु भयो र चाँडै घरबाट पसेको थियो। दृश्य मा लरेना र मरियम हेलबर्ट को मृत्यु भएको थियो। अरू कसैलाई चोट लागेको थिएन।
फेरि, पछिल्लो घटनाक्रम कथामा उच्च छ। तर ती सँधै मूल घटनाबाट पृष्ठभूमिमा बाँधिएका छन्। यस तरिका, पहिलो पटक यस कथाको बारे सिक्न पनि पाठकलाई सजिलै संग के भयो भनेर बुझ्न सक्नुहुनेछ।
फीचर कहानियों को लागि ग्रेट लेडी कसरि लिखें
पत्रकारहरू अन्य रिपोर्टरहरूको कार्यलाई पग्लाइज गर्नदेखि कसरी जोगिन सक्छन्?
पहिलो संशोधनको अर्थ
बेनामी स्रोतहरूसँग कसरी काम गर्ने
पत्रकारिता आधारभूत: कसरी रिपोर्टिङ उपकरणको रूपमा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने
विज्ञान मेला परियोजना ल्याब रिपोर्ट टेम्प्लेट
समुद्री क्षेत्र परिभाषा
तपाईंको कल्याणको शक्ति कसरी परीक्षण गर्ने
ईस्टर ट्रिड्यूम के हो?
Balmer सीरीज परिभाषा
समाजशास्त्रमा स्तर र मापनको माप बुझ्न
माइक्रोसफ्ट वर्ड 2003 प्रयोग गरी कागज लेख्न
इतिहास र शैली गाइड को जेनेट कुऊ डू
सुरूवात: मोटरसाइकल घुमाउने पहिलो चरण
धेरै छिटो गजल खेलमा
एण्टीनीको पत्नी को थिए, र तिनीहरू कतिजना त्यहाँ थिए?
इडीहोमा सर्वश्रेष्ठ फ्लाई फिशिङ
सुपर बाउलको जवान र सबैभन्दा पुरानो
उद्घाटन प्रश्न के हो?
कसरी फ्रांसीसी शब्द "कारण" (कसरी कारण, कुराकानी गर्न)
कस्तो रासायनिक कपाल हटाउने काम गर्दछ
अमेरिकी गृहयुद्ध: मेजर जनरल लेफायेट म्याकलाव
गहिरो स्टैक पोकर टूर्नामेंट रणनीति - 100+ ठूला ब्लाइन्ड्स
स्विमिंग ओपन टर्न्स स्किमर्स को लागि
Casser संग फ्रेंच अभिव्यक्ति
GARFIELD - उपनाम अर्थ र पारिवारिक इतिहास